ပုံသေဘရောက်ဇာကို iPhone ပေါ်တွင်မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း။ Emulator.online ▷🥇
iPhone အတွက် iOS 14 update ရောက်ရှိလာချိန်တွင် Safari application ကိုသွားစရာမလိုဘဲအီးမေးလ်များ၊ chats များနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များအတွင်းရှိဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လင့်ခ်များကိုဖွင့်ရန်ပုံမှန် application ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Apple ထုတ်ကုန်) ။ ၎င်းသည်အသေးအဖွဲနှင့်သိသာထင်ရှားနေပုံရသည်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Android လောကမှလာလျှင်၊ Apple ၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက် / အားနည်းချက်တစ်ခုမှာအက်ပဲလ်၏အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ခိုင်မြဲသောနှောင်ကြိုးကြောင့်တိတိကျကျဆိုရလျှင်လုံးဝလျစ်လျူရှု။ မရနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းကို Apple ဂေဟစနစ်ကိုပိုမိုတသမတ်တည်းဖြစ်စေရန်အားသာချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါက၎င်းသည်အသုံးပြုသူ၏လွတ်လပ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ကန့်သတ်ထားသည်။ အမှန်မှာ၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသောဘရောင်ဇာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများအားဖွင့ ်၍ မရပါ။
ဒီ update နှင့်ဂီတသည်ပြောင်းလဲသွားပုံရသည် - အတူတူကြည့်ကြစို့ iPhone မှာ Default browser ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲApp Store တွင်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများစွာ (ဂူဂဲလ်ခရုမ်းမှ Mozilla Firefox၊ အော်ပရာနှင့် DuckDuckGo ၏အမည်မသိဘရောက်ဇာမှ) ကိုရွေးချယ်ပါ။
အောက်ပါအခန်းများတွင်ကျွန်ုပ်၏ iPhone အတွက် system updates များကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်ကိုပထမ ဦး ဆုံးသင်ပြပါလိမ့်မည် iOS 14 operating systemကျွန်ုပ်တို့၏ browser ကို install လုပ်ပြီး၎င်းကို iPhone ၏ default browser အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။
ဆက်မလုပ်မီကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းအကြံပြုပါသည် iPhone updates များကိုစစ်ဆေးပါအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လအနည်းငယ်အတွင်းဗားရှင်းပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုသတိမပြုမိပါက iPhone ကိုမွမ်းမံရန်အတွက်၎င်းကို (အိမ်၌ဖြစ်စေ၊ ရုံး၌ဖြစ်စေ) မြန်ဆန်သော Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ၊ လျှောက်လွှာကိုနှိပ်ပါ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ menu ကိုသွားကြကုန်အံ့ ယေဘုယျ, ငါတို့အပေါ်ကိုရွှေ့ software ကို update ကို အကယ်၍ အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းပါ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ.
download ပြီးသွားရင် iPhone ကို restart လုပ်ပြီး operating system အသစ်ကိုစောင့်နေလိမ့်မယ်။ iOS 14 ကိုမ update ကိုရှိလျှင် (ငါတို့ iPhone ကအရမ်းဟောင်းနေလို့ပါ) \_ t ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန် browser အတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်လို့မရပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ငါတို့လမ်းညွှန်ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ အိုင်ဖုန်းမွမ်းမံနည်း။ ၎င်းအစားကျွန်ုပ်၏ iPhone အသစ်သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုအတွက်ပြောင်းလဲလိုသော်လည်း iOS 14 နှင့်လိုက်ဖက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ဒီနေ့ဘယ် iPhone ဝယ်သင့်သလဲ။ ရရှိနိုင်ဗားရှင်းနှင့်မော်ဒယ်များ။
Third-party browser ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ
iPhone ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် App Store ကိုဖွင့ ်၍ မီနူးကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး browser ကိုတပ်ဆင်သည် ရှာဖှေထို့ကြောင့် Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Touch, DuckDuckGo browser တို့ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ iPhone တွင်ဘရောင်ဇာတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုပြီးသားဖြစ်ပါက၊ ဤလမ်းညွှန်ချက်၏အရေးအကြီးဆုံးအခန်းကိုမဆက်မီ၊ App Store ကိုဖွင့ ်၍၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ညာဘက်အပေါ်ညာဘက်ရှိပရိုဖိုင်းအိုင်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အားနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့နောက်ဆုံးသတင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်သေချာစေပါ။ နောက်ဆုံးတော့နှိပ် အားလုံး Update လုပ်ပါ။ Safari အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအခြား browser များကျွန်ုပ်တို့သိသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်သည် အကောင်းဆုံးဘရောင်ဇာများ iPhone နှင့် iPad အတွက် Safari အတွက်အခြားနည်းလမ်းများ.
default browser အသစ်ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ
iPhone ပေါ်မှ third-party browser ကို download လုပ်ပြီးသို့မဟုတ် update လုပ်ပြီးသည်နှင့် application တစ်ခုသို့ပို့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်မည့် link တစ်ခုသို့မဟုတ် web page တစ်ခုအတွက် default browser အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ, သင် browser ၏အမည်ကိုရှာတွေ့သည်အထိ scrolling နှင့်, တစ်ချိန်ကဖွင့်လှစ်, မီနူးပေါ်တွင်နှိပ်ပါ ပုံမှန် browser app နှင့်ဤစာရင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါစေ။
ဘရောင်ဇာ၏အမည်ကို နှိပ်၍ ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံပြီးကြောင်းပြသည့်အမှတ်အသား၊ အမှတ်အသားကိုပြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘရောက်ဇာကိုမတွေ့ပါ (သို့) ပစ္စည်းမပေါ်ပါ ပုံမှန် browser app? Browser နှင့် Operating System သည်နောက်ဆုံးပေါ် (ယခင်အခန်းများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း) နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ သို့မဟုတ်ပါကမည်သည့်ရွေးချယ်မှုမျှပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒီအပြောင်းအလဲလေးတစ်ခုနဲ့အတူအက်ပဲလ်ဟာသေတ္တာထဲကနေထွက်သွားဖို့ကြိုးစားပြီးခေတ်သစ် Android စမတ်ဖုန်းမှာတွေ့ရတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျမှုတို့ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့် iOS 14 နှင့်အီးမေးလ်များနှင့်ချက်တင်များတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော link တစ်ခုစီအတွက် Safari ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မပတ်သက်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအခါတိုင်းအကြိုက်ဆုံး browser ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကို "တစ်ဝက်တော်လှန်ရေး" (သို့) ဆင့်ကဲဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ အက်ပဲလ်က၎င်း၏သုံးစွဲသူများသည် ၄ ​​င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့် application များနှင့်အမြဲတမ်းဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း၊ အများအားဖြင့်သူတို့ဟာ Safari ကိုသုံးသောကြောင့် စနစ်မ အခြား browser များ (default iOS 14 ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်) ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Browser အပြင်အခြား application application များအတွက်လည်း default application switch ကိုရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Apple ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော system applications များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client များနှင့်အီးမေးလ်များသို့မဟုတ်ပူးတွဲဖိုင်များကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ပိုများသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူပိုမြန်ပေမယ့်မပေး) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Android စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိမူလအက်ပ်များကိုပြောင်းလဲလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် Android မှာရှိတဲ့ပုံမှန်အက်ပ်တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows 10 ကွန်ပျူတာကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိသော်လည်းပုံမှန်ပရိုဂရမ်များမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုကူညီနိုင်သည်။ Windows 10 မှပုံမှန်အက်ပ်များကိုမည်ကဲ့သို့ပြောင်းရမည်နည်း.
ကျွန်တော်တို့ Safari ကိုအပြာရောင်ကနေမထွက်စေချင်ဘူးလားဒါမှမဟုတ် iPhone အတွက်အကောင်းဆုံး browser လား။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါး၌ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်သည် Safari လှည့်ကွက်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော iPhone နှင့် iPad browser ၏အင်္ဂါရပ်များဒါကြောင့်ဒီ default browser ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးဝင်သောလှည့်ကွက်များနှင့်လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်မှုများကိုချက်ချင်းသင်ယူနိုင်သည်။